सानेपा मुना ह’त्या प्रकरण : पूर्वसचिव अर्जुन कार्की माथि पनि उठे यी ७ प्रश्न ! – Khabarhouse
सानेपा मुना ह’त्या प्रकरण : पूर्वसचिव अर्जुन कार्की माथि पनि उठे यी ७ प्रश्न !
Khabar house | ४ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०६:१८ | Comments
काठमाडौं: ललितपुरको सानेपामा घरमै रहेका कामदारबाट ह’त्या गरिएकी मुना कार्की र विजय दुवैको मोबाइल लिएर अनुसन्धान जारी राखेको प्रहरीले जनाएको छ । पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमती मुनाको सोमबार घरमै ह’त्या भएको थियो । उनको ह’त्यापछि विजय चौधरीले दे’हत्याग गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अहिले दुवैजनाको मोबाइल डिटेल हेर्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घरमा काम गर्ने अन्य महिला कामदार, ड्राइभर र प्लम्बरसँग पनि बयान लिइ सकेको जनाएको छ । एसएसपी दुर्गा कार्कीले दिएको जानकारी अनुसार तीनै जनासँग बयान लिइ सकि एको छ भने दुवैको मोबाइल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ । उनीहरु दुवैको मोबाइलको कल डिटेल पनि सुक्ष्म रुपमा हेर्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
तल दिइएको भिडियोमा मुना कार्की ह’त्या प्रशंगमा यस्ता प्रश्न उठाइएको छ। कलाकार सविता भट्टराईले यो भिडियोमा यस्ता प्रश्न उब्जाएकी छन्। भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको उनको भनाईलाई लिएर सर्वसाधारणहरुले पनि थुप्रै प्रश्न सहितका प्रति कृया लेखेका छन्।
१ मुना कार्किलाई चौधरिले ह’त्या गरेर चौधरिले आफैले दे’हत्याग गरे भनिएको छ । ल अब तपाईहरु नै भन्नुस पुर्व सचिव कार्कि मन्दिरबाट घरमा फर्किदा मुनाको शरीर ता’तै थियो र उनलाई हस्पिटल लगियो तर चौधरि पछि बाट दे’हत्याग गर्ने चौधरिको शरीर किन चिसो शंका यहाँ छ । २ छोरालाई विद्यालय लैजान ५ मिनटको बाटोका लागि गाडी र ड्राइभर ब्यवस्था गरेका पूर्व सचिवले आफु भने सानेपा वाट पशुपति सम्म जाँदा ड्राइभर नलिएर आफै गाडीमा किन गए ?
३ हिन्दु ध’र्मको मान्यता अनुसार श्रीमती महिना वारी भएको बेलामा धार्मीक काम गर्नका लागि श्रीमान पनि अ’पवित्र मानिन्छन् । रुद्रि पुजा श्रीमतीबीना एक्लै गरिदैन। तर मुनालाई घरमा म’हिनावारी भएको बेलामा एक्लै छोडेर पूर्व सचिव त्यही समयमा पुजा लगा उन भन्दै पशुपति मन्दीर किन गए ? ४ यदि महिनावारी बार्ने चलन त्यो घरमा थियो भने पुजा गर्न नगएकी मुना भान्छामा किन काम गर्दै थिइन् ?
५ कामदार विजय चौधरीको शरिरमा केही घाउ चो’ट समे नदेखिनु । ६ सिसि टिभी फुटेजमा पनि मुनालाई पि”र्काले हा’नेको मात्र देखिने तर घर भित्र भएका अन्य गतिविधि भने नदेखिने कारण के हो? ७ गायीका आस्था राउतको घटनामा सामान्य विषयमा पनि सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्ने प्रहरीले यस्तो वि’वादास्पद घटनाको भिडियो किन सार्वजनिक गर्दैन ? भिडीयो यहाँ लिंकमा छ ।